Xukuumadda Somaliland oo digniin u jeedisay Warbaahinta madaxa-bannaan ee dalka ka hawl-gasha | Somaliland Post
Home News Xukuumadda Somaliland oo digniin u jeedisay Warbaahinta madaxa-bannaan ee dalka ka hawl-gasha
Hargeysa (SLpost)- Xukuumadda Somaliland ayaa uga digtay warbaahinta madaxa-bannaan ee dalka ka hawl-gasha inay baahiyaan warar ku saabsan colaadda ka taagan deegaanka Ceel-Afweyn oo aan ahayn xogaha rasmiga ah ee laga helo Guddiga Madaxweynuhu u xil-saaray dedaallada Nabadeynta Ceel-Afweyn.
Sidoo kale, waxa warbaahinta madaxa-bannaan looga digay baahinta warar la xidhiidha Hawl-gallada difaaca Qaranimada ee Ciidamada dalku kaga jiraan Jiidda hore, waxaana lagu war-geliyey warbaahinta inaanay baahin Karin warar mala-awaal ah oo aan ahayn ilaha rasmi ah iyo Talista Ciidanka Qaranka.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed ay baahisay wakaaladda wararka ee SOLNA oo ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta, kaas oo u qornaa sidan:- “War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland ayaa uga digaya warbaahinta ka hawlgasha Somaliland inay warar aan ka soo bixin guddida nabadeynta ee Ceel-afweyn laga baahiyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Sida ay ina farayso diinteenna suuban iyo xeerka saxaafadduba waa mid waajib ku ah qof kasta oo hawl saxaafadeed gacanta ku haya ama muwaadin ah inuu ka taxadaro, kana fogaado wax kasta oo waxyeelayn kara hawsha nabad raadinta ee ergaddu u fadhido, Waxaana mamnuuc ah wax kasta oo carqaladeyn kara nabadda.
Wararka kaliya ee laga tabin karaa jiidaas dagaalku ka taagan yahay ee Tuka-raq waa midka ka soo baxa taliska ciidanka ama xukuumadda, waxaana reebban in warar malo-awaal iyo kuwo laga soo xigtay meelo kale oo aan ahayn ilaha rasmiga ah laga sii daayo guud ahaan warbaahinta dalka.” Sidaas ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka.